Lodsia any Manakara Tafidina 500 Ar ny garaba
Tafidina hatrany amin�ny 500 Ar ny iray garaba amin�ny lodsia ankehitriny any amin�ny distrikan�i Manakara,hoy Ralaindrina Marcel, mpikambana teo anivon�ny kongresin�ny tetezamita teo aloha sady mponina any an-toerana.
Noho ny tsy fahavitan’ny seranan-tsambon’i Manakara manondrana ny vokatra mankany Toamasina no antony. Tsy misy sahy mitatitra ny vokatra amin’ny alalan’ny fiara ireo mpandraharaha sao ho lo fotsiny eny an-dalana ka hiteraka fatiantoka. Mijanona ho an’ny tsena anatiny ihany ny vokatra ao Manakara ka izay fomba hamadihana azy ho vola sisa no kendren’ireo tantsaha mpamokatra. Miantso ny mpitondra fanjakana mba hijery akaiky ny zava-misy any an-toerana ity tompon’andraikitra ity. Maty ny tantsaha raha mbola mitohy ny tranga toy izao sady potika ihany koa ny foto-pivelomany. Ho an’ny jirofo manokana dia notsindrian-dRalainirina Marcel fa tafidina hatrany amin’ny 15.000 Ar ny iray kilao amin’izao fotoana ao Manakara raha 85.000 teo aloha. Marihina fa manodidina ny 15.000 Ar ny vidin’ny lodsia iray garaba tonga eto an-drenivohitra ankehitriny.